Canada: Ahmed Hussein oo markii Sadexaad(3) Wasiir loo magacaabay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Canada: Ahmed Hussein oo markii Sadexaad(3) Wasiir loo magacaabay.
Ra’iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golahiisa wasiirrada oo ka kooban 38 wasiir, kuwaasoo ay kala bar dumar yihiin.
Axmed Xuseen oo ah Soomaali-Canadian ayaa markii saddexaad kamid noqday golaha wasiirrada, isagoo loo magacaabay wasiirka guryeynta, kala duwanaanshaha iyo kawada qeyb galinta Canada.
Dad badan ayaa rumeysan in dowladdan cusub ay horyaallaan waxyaabo badan oo uu ugu horreeyo la tacaalidda xanuunka COVID-19.
xigasho/ Kilde: VOA
Previous articleDeg-deg: Labadan nin ee walaalaha ayaa loo raadinayaa dilkii Xamse Xaashi Aadan.
Next articleKosovo: Norway ayaa nagala soo xiriirtay soo gacan-galinta nimanka ku eedeysan dilka Xamse.